Fivavahana tsy misy andriamanitra
Tany efitri Sinay
Tsy fisian-diso ao aminny Baiboly
Ny Soratra Masina - Fandikan-Tenin ny Tontolo Vaovao no anaranny Baibolin ny Vavolombelon i Jehovah amin ny fiteny malagasy. Nandikana ny andian-teny anglisy hoe New World Translation of the Holy Scriptures izany. Atao hoe Soratra Hebreo sy Arami ...
Ny fedrà dia tantara na hevitra foronin ny saina ho enti-manazava ny zava-mitranga eto amin izao tontolo izao na eo amin ny fiarahamonina ary indrindra natao hanorenana ny fanao eo amin ny fiarahamonina araka ny anjara toeran ny soatoavina fototr ...
Ny Epistily voalohany nosoratani Jaona na Epistola voalohany nosoratani Joany na Taratasy voalohany nosoratani Joany dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Atao hoe Epistily katolika io epistily io ...
Robert Baden-Powell dia mpanoratra, mpanao politika mizaka ny zom-pireneni Fanjakana Mitambatra teraka ny 22 Febroary 1857 tao London ary maty ny 8 Janoary 1941. Izy no namorona ny Skotisma.
Esther Randriamamonjy, izay tena anarany dia Esther Rasoloarimalala Randriamamonjy, dia mpanoratra Malagasy. Fantatra aminny sehatry ny literatiora ho anny ankizy aminny alàlanireo tantara foronina sy tantara izy; nandika ny tantaranny tanora nos ...
Ny Epistily faharoa nosoratani Jaona na Epistola faharoa nosoratani Joany na Taratasy faharoa nosoratani Joany dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Atao hoe Epistily katolika io epistily io noho ...
Maro ny fiteny teneninny mponini Madagasikara, izay tsy Malagasy daholo fa misy vahiny koa. Ny fiteny malagasy no be mpiteny indrindra, manaraka azy ny fiteny frantsay, avy eo ny fiteny anglisy. Misy mpiteny kômôriana, mpiteny gojaraty, mpiteny h ...
I Jobily Rakotoson dia Malagasy, mpanandro, avy aminny foko Antemoro, raha ny marina kokoa ao aminny foko Onjatsy, ao aminny faritra Vatovavy Fitovinany, mpahay tantara, pitahiry ny fombandrazana malagasy, isanireo mahalala ny sorabe eto Madagasi ...
Ny Epistily fahatelo nosoratani Jaona na Epistola fahatelo nosoratani Joany na Taratasy fahatelo nosoratani Joany dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Isanireo atao hoe Epistily katolika io epist ...
Ny Fiangonana nohavaozina dia fiangonana protestanta vokatry ny Fanavaozam-piangonana tamin ny taonjato faha-16 izay nandray ny fampianaram-pinoan ireo mpanavao fiangonana toa an i Ulrich Zwingli sy indrindra i Jean Calvin. Fiangonana prôtestanta ...
Ny filaza tsotra dia endriky ny teny atao vara na entimilaza izay entinny mpiteny na ny mpanoratra hanehoany fa mifanentana aminny zava-misy marina ny votoantin ny zavatra lazainy. Toetra ara-keviteny ankapobeny ihany anefa izany satria raha tsy ...
MediaWiki dia rindrankajy wiki iray manana ny lisansy GNU General Public License na GPL. Nosoratana taminny PHP ary mitaky banky angona MySQL. Tany am-boalohany dia ho ani Wikipedia, raki-pahalalana malalaka mampiasa wiki, no namoronana azy, fa a ...
Ny Matevina Toy Ny Biriky no fahadimy rakikira ny malagasy rock band tamini jetro Tull, navoaka taminny 10 Martsa ny taona 1972 ny alalan ny firaketana an-tsoratra ny orinasa "Chrysalis Firaketana an-tsoratra". Ny firaketana an-tsoratra dia ahita ...
Ny Baiboly katôlika aminny teny malagasy dia fandikana ny Baiboly ampiasainny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina eto Madagasikara. Efa misy fanitsiana natao io Baiboly io ka misy ny Baiboly amin ny dikan-teny tranainy izay ahitana ny anaran Andr ...
Ny tetiandro hindoa dia tetiandro manara-bolana sy masoandro izay ahitana fanova arakaraka ny faritra ampiasana azy: ireo Fanjakana indiana dia manana ny fomba fijeriny ary i Pakistàna dia manana ny azy koa. Ny andro voalohany ao aminny taona voa ...
Ny Eklesia Episkopaly Malagasy, hafohezina aminny hoe EEM, dia anarana iantsoana ny Fiangonana anglikana eto Madagasikara. Tany am-piandohana dia mbola Diosesy tokana ny teto Madagasikara ka nantsoina hoe Diosesini Madagasikara. Taminny volana Ja ...
Ny sorona dia fomba tanterahina hanomezana haja na ho enti-mifona na mangata-pitahiana aminny andriamanitra na ny fanahy hafa, ka matetika famonoana biby no atao. Araka ny finoan-drazana malagasy dia ny mpisorona na ny mpitan-kazomanga no mitarik ...
I Cousins William Edward dia misionera anglisy protestanta tonga tao Antananarivo taminny 02 Septambra 1862. Havanana aminny teny malagasy izy ka izy no nitarika ny fanitsiana ny Baiboly aminny teny malagasy izay namoahana andiany voalohany tamin ...
Ny Hiram-pirenena, aminny ankapobeny, dia hira manambara fitiavan-tanindrazana ka mankalaza an-kira na ny tantara, na ny fomban-drazana na ny ady sarotra izay niainanny firenena iray. Io hira io dia voatokana aminny fomba ofisialy ho hira fanevan ...
Ny protestantisma dia efa tonga teto Madagasikara taminny vanim-potoana faha mpanjaka ka laharana faha-2 manaraka ny katolisisma izy raha ny isanny mpino ao aminy no jerena. Ny protestantisma eto Madagasikara dia misy fiangonana maro ka ny roa vo ...
Ny fiteny dia fomba fampitana ny fampahalalana. Ny hevitry ny hoe fiteny aminny fiteny malagasy dia "teny iombonanny vondronolona iray", ny heviny hafa koa dia "zavatra azo tenenina" na "fomba na baiko atao fifandraisana". Ny heviny hodinihana at ...
Ny Fikambanana Skoto eto aminny Fiangonana Loterana Malagasy dia sampana ao aminny Fiangonana Loterana Malagasy izay misahana ny skotisma ao aminio fiangonana io ka mitambatra ao ny Tily sy ny Mpanazava. Miandraikitra ny fomba fanabeazana ny zaza ...
Ny zafindraony dia karazan-kira malagasy malaza any aminny faritry ny Betsileo, izay vokatry ny fiezahanny Malagasy hampifangaro ny fomba fihira vazaha sy ny anny malagasy, taminny nidiranny fivahana kristiana teto Madagasikara, ka ahenoana olona ...
Ny lalàna dia fitsipika na amboaram-pitsipika tsy maintsy arahinny olon-drehetra, avoakanny mpitondra fanjakana, na voarakitry ny fomba amam-panao hatranny fahagolan-tany, na ataonny solombavambahoaka. Ny lalàna koa dia fepetra arahina aminny sok ...
Ny famorana dia fanesorana ny loha tsitsy, izay misy heviny ara-pivavahana, indrindra ao amin ny jodaisma sy ny silamo. Ny famorana dia fombafomba ara-pivavahana be mpanao nandrita ny Andro Taloha. Fomba mampanana sata vaovao ny famorana eo amin ...
MBoutah - 1998 – 1999: seho an-tsehatra voalohany tao aminny trano fisakafoana Kabary Antsirabe, nisalorany ny anarana hoe Tamboho, gadona nentindrazana Malagasy sy ny reggae Fandraisam-peo ny kapila mangirana voalohany gadona reggae niaraka tami ...
Ndrina Zopanage na Ndrina Ranaivoarimanana dia mpikambana ao aminny tarika Zopanage hatrany am-piandohany taminny taona 80 ary izay no antony nisafidianany ny anarana hoe Ndrina Zopanage eny an-tsehatra. Azo lazaina fa nianoka tanaty mozika hatra ...
Sham & Andi dia tarika iray mivoy ny gadona Rap sy RnB malagasy, mipetraka ao Moramanga. Ny tarika moa dia niforona taminny taona 2015. SHAM QM &gt; ANDRI-JEAN Adorson Safidy dia teraka tao Ambatosoratra taminny 03 marsa 1996; ANDI MARDI &gt; AND ...
Vahömbey dia tarika malagasy mirona aminny bàn-kira rock sy blues. Rabearison Roland Dieu Donné Vahömbey na Rola no filohanny tarika. Dia ao koa i Milanto, Kims, Mirana, Hery ary Andianjara taminny taona 2007. Hoy i Rôla hoe : "Asakasakizay sendr ...
Ny volana dia tsingerim-potoana na halavam-potoana mitovitovy halava aminny tsingerim-pihodinanny Volana aminny Tany. Arakaraka ny tetiandro ampiasaina ny halavanny volana ka mety ho 28 ka hatraminny mihoatra ny 30 andro izany. Misy herinandro ef ...
Himnusz no lohateninny ny hiram-pirenena ny Hongria. Izany dia nolaniana taminny 1844 ary ανακρούεται voalohany kosa ny lanonana ofisialy. Ireo tononkira nosoratani ny Φέρεντς Κόλτσεϊ sy ny mozika avy aminny Φέρεντς Έρκελ. Ny tononkira hongroà hi ...
Ny Taona 80 no nampalaza ani Lalatiana, taminilay hira hoe "Tsara Fiafarana" sy ny maro samy hafa. 1991. Nahazo ny prix de la decouverte RFI izy taminilay hira noforonony hoe "Ho Aniza ny Masoandro". Nandritra ny Taona 90 Dia nanantontosa fiakara ...
I Luis Miguel Sánchez Cerro dia miaramila sy mpitondra fanjakana tao Però izay fioham-pirenena indroa tao amin io firenena io. Filoha izy tamin ny 27 Aogositra 1930 hatramin ny 1 Marsa 1930, amin ny maha fiohan ny Junta azy taorian ny fionganan i ...
Niorina tamin’ny taona enina ambin’ny fitopolo sy sivinjato sy arivo ny Alliance Française ny Faradofay dia fikambanana mikatsaka tombotsoa natokana ho an’ny Malagasy. Hatramin’ny iraika amby telopolo jolay dia tafiditra tao anatin’ny tamban-jotr ...
Ny fivavahana aminny razana dia fivavahana amin ny fanahin ny maty izay heverina fa afaka mitahy sy miaro ny olona mbola velona izay ankasitrahany na manasazy izay olona tsy ankasitrahany. Fanao iraisan ny fivavahana tsy iantsoana mivantana andri ...
Ny Bahaisma dia niorina teto Madagasikara taminny tenantenanny taonjato faha-20 ka fahatanterahanny fikasani `Abdul-Bahá, mpitarika ny Bahay maneran-tany, izany, izay naniraka ireo mpanaraka ny finoana bahay handeha aty Madagasikara. Tonga teto M ...
Ikala dia ny anaram-bositra entini Helisoa Rabezato aminny maha artista malagasy azy. Taminny taona 1966 izy no teraka, tao Antananarivo. Mpamorona sy mpanamboatra kanto izy, ka miopàna indrindra aminny art plastique ny saganasany. Mpandravaka ma ...
Ny Ipernity dia toerana izay manome maimaim-poana ny tambajotra sosialy ny asa, ny haino aman-jery sy ny fizarana sary. Izany koa dia asa izay olona iray dia tsy maintsy mandoa vola ho.x. asa ho anny matihanina. Ny website dia natao ho anny mpano ...
Toliara Sands dia orinasam-pitrandrahana harena an-kibonny tany, dia ny fasi-mainty na ilmenita, ao aminny Faritra Antsimo-Andrefana. Orianasa aostraliana ny Toliara Sands izay nanorina ny foibeny any aminny 50 km avaratry ny tananani Toliara ary ...